Magaala Woodbury County keessati namni har’a haarawa COVID-19 qabame 17 dha | KWIT
Greime akka jedhetti naaf gala maaliif hojii baaye akka banaamuti hin jiree fi umaaniis maalif akka banuu fudhaan itti fufee hin hubadha jedhe. Garuu, wanna hojanuu fayyaa nama kan eegu safaraan hojachuufi wanna dhukuba babal’isu akka hin hojanne barbaanna jedhe.
Greime akkasumas haasawa deparmenti mana barumsa Iowa haguugi fuula barattoottaaf, barsiisotaafi mana barumsaa k-12 kan jira malif barbaachisa akka hin taane gaafatan.
Greime alaaban diiman muraasni akka isaaf uumame hime. amma Greime akka jedheti manni fayyaa Sioux land haguugi fuula, addaan faggeenyaafi seera biraa irratti akka district naannowa wajjiin hojachuu akka itti fufan hime. Akka jedheti deparmentin waan community dhaaf gaari ta’e akka hojattu garuu kan seeran alaati miti kaa hojanuu jedhe.
Community school district kan magaala Sioux City “ Return to Learn” ykn Deebi’uu gara Barachuu irrati akka bakka mana barumsaa marattuu haguugi fuula fayyadaman gorsan, garuu akkamatti akka irrati hojatamuu hagammaa hin ibsamne. distictin mana barumsa barumsatti August 24 kan deebi’u ta’a.
Warri hojattoota sadihii kan Tyson food plant kan Iowa keessa dalagan osoo dalaganii sababa corona virus kan du’an warri jaraa kaampaanicha kasasuu jirani. Kaampaanichi kijibaan hojattoota akka dalagaa irra turan godhee jira jedhan.akka manni murtii jedheti vayrasiin kan babal’atee waterloo pork keessati kara march dhumaa April jalqabaati garuu odeefannoo hojattoota fi ummata irraa dhooysani. Dhukubichi wayta guddataa deemu, akka himatamanitti kaampaanin odeefanno kijibaa waa’e safety ummata irraa kenne akkasumas hojattooni osoo dhukubu akka bakka hojii isaani dhabattani irraa akka hojatan taasise fi umatati dalaydoota keena eega jirra jedhani himani.
Briar Cliff University fall seemisteera Aug.24 jalqabuu karoorfate, sagantaa haarawa elementii online haarawa qaban wajiin. Guyyaa jimaata kan ufkeessa hin qabne fi barattoota kan barbaadu yoo ta’u akkasumas hojattooni college akka haguugi fuula uffatan barbaadda.
Guyyaa jimaata kan gad dhiifame, durabu’aan BCU Rachelle Karstens jijiirana haarawa bara 2020-21 akka mullisan hime, kutaan barumsaa marayuu namaa xiqaa akka qabachuu guddisan akkasuma barattootaafi faculty ykn barsisoota fi dalydoota isaani akka corona virus hin babal’anne qarqaara.